ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ရှေ့နေက ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်တာလဲ | Phoe Phyu & Associates
HomeBlogsPhoe Phyu's blogဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ရှေ့နေက ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်တာလဲ
What DoesaLawyer Need to Do for Construction?
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ရှေ့နေက ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်တာလဲ)
အရင်တစ်ခေါက်ကတော့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ဘယ်လိုစာချုပ်စာတမ်းတွေ၊ ပြီးတော့ ပါဝင်သင့်တဲ့ အချက်တွေ၊ ပြင်ဆင်ရေးသားခြင်းတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာတော့ ဒီစာချုပ်စာတမ်းတွေနဲ့ ကိုယ့်ပရောဂျက်ကို တရားဝင် ခိုင်မာအောင် လုပ်ပေးမယ့် Construction lawyer ဟာ ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုကိစ္စတွေမှာ ဘာတွေကူညီမှာလဲ၊ သူတို့တွေကိုရော မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာလား၊ သူတို့ကရော ဘာတွေလုပ်ပေးတာလဲဆိုတာတွေကို အဓိကထား ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေ မရှင်းပြခင်မှာ ဥပဒေအကြောင်း နည်းနည်းပြောပြပါဦးမယ်။ ခေတ်စနစ်တွေ ပြောင်းလာတာနဲ့အမျှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုနေထိုင်ရေး စနစ်တွေကလည်း ရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့လောကကြီးကို အစီအစဉ်တကျ ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက် ဥပဒေကိစ္စတွေကို သိရှိဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင်တော့ ဥပဒေဆိုတာ မညီမျှတဲ့အရာတွေကို ဘက်လိုက်မှုမရှိ၊ ညီမျှအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုလိုပါပဲ။
Do We Really Need A Construction Lawyer?
လိုရင်းကို ဆက်သွားပါတော့မယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုတာ နိုင်ငံတစ်ခု ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာမှာ အရမ်းအရေးပါတဲ့ နေရာမှာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံမှာဆို ပိုလို့တောင် အရေးပါပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာတော့ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေသေးတာကြောင့် လူတော်တော်များဟာ စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာ ဥပဒေရဲ့အရေးပါမှုကို သတိမပြုမိကြပါဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဟာလည်း သူ့နည်းစနစ် သူ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ရှိပါတယ်။ Construction Business ရဲ့ဖယ်ထုတ်လို့မရတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ Construction law ကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။ ဒီထဲမှာ law ဆိုတာ ပါလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေတို့ ကိုယ်စား ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ ဥပေဒပညာရှင်လည်း လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Construction လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ Construction Lawyer တစ်ယောက် လိုကို လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ရှေ့နေကရော တရားဥပဒေနဲ့ဆိုင်တဲ့ တရားစွဲ ဘာညာ ကိစ္စမှ လိုတာလား ဆိုရင်တော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ တရားစွဲတာ ဘာညာမဖြစ်ခင်မှာ မဖြစ်ရအောင်၊ ဒါမှမဟုတ် နည်းအောင်၊ ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် မကြီးကျယ်အောင်၊ ကြီးကျယ်ခဲ့ရင်လည်း မျှမျှတတနဲ့ အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပေးရပါတယ်။ ဥပမာ - လုပ်ငန်းနှင့် အလုပ်သမား ပြဿနာ၊ အလုပ်အကိုင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုပြဿနာ၊ အာမခံပြဿနာတွေနဲ့ ဒေဝါလီခံရနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာလည်း ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းလာရနိုင်ပါတယ်။ ဒါတောင် အနည်းအကျဉ်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဒါဆို Construction Lawyer တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်အပိုင်းတွေကို တာဝန်ယူကြတာလဲ?
မိတ်ဆွေတို့ ငှားလိုက်တဲ့ ရှေ့နေဟာ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တဖြစ်လဲ အတွင်းရေးမှူးကောင်း တစ်ယောက်လို့တောင် ယူဆလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လုပ်ငန်းအစကနေ စပြောရရင် Construction Lawyer တစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်က Construction တစ်ခုလုံးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းမှာ အကျုံးဝင်တဲ့အထိ အရေးပါပါတယ်။ ရှေ့နေတစ်ယောက်ဟာ Client တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်တွေထဲက တချို့ဖြစ်တဲ့ စာရင်းဇယား၊ အချိန်ဇယား ရေးဆွဲခြင်း၊ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုဆိုင်ရာကိစ္စ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖြည့်ဆည်းပြောင်းလဲခြင်း၊ စာချုပ်စာတမ်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများနဲ့ အဆိုပြုချက်များကို တင်ပြခြင်း၊ အဆုံးသတ်ခြင်းကိစ္စတွေကို ပြီးမြောက်အောင် ထောက်ပံ့ပေးရပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် ဥပဒေဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုကိစ္စတွေပေါ်လာမှ ဖြေရှင်းပေးတာလို့ထင်နေတယ်ဆိုတော့ မိတ်ဆွေမှားနေပြီပြောပါရစေ။ အမှန်တော့ ဒီလိုတွေ ဖြစ်မလာအောင် အရင်ကာကွယ်ပေးရပါတယ်။ မဖြစ်ခင်တည်းက ကြိုတင်ကာကွယ်တယ်ဆိုတာ လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ပါ။
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်တစ်ချို့ကတော့ Constrution Lawyer တစ်ယောက် တာဝန်ယူ Cover ပေးရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဌေးကိုယ်တိုင်ကလည်း ပညာသည်ကို ဥပဒေပညာနဲ့ ဆိုင်သရွေ့ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာ ညွှန်ကြား တာဝန်ပေးအပ်နိုင်ပါတယ်။
- Alternative Dispute Resolutions (တရားတဘောင်ဖြစ်ခြင်းမှအပ အခြားနည်းရွေးချယ်၍ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်း)
- Arbitration (ခုံသမာဓိနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်း)
- Bankruptcy (ဒေဝါလီခံရခြင်း)
- Building permits (အဆောက်အအုံပါမစ်များ)
- Case Law Summary (ဖြစ်ရပ်မှန်ဥပဒေအနှစ်ချုပ်)
- Construction claims (ဆောက်လုပ်ရေးတောင်းဆိုမှု)
- Constructions liens (ဆောက်လုပ်ရေးပိုင်ဆိုင်ခွင့်)
- Davis-Bacon Act, wage requirements (လုပ်အားခလိုအပ်ချက်များ)
- Delays (နှောင့်နှေးမှုများ)
- Drafting construction contracts (ဆောက်လုပ်ရေးစာချုပ်ရေးဆွဲခြင်း)
- Employment Immigration (အလုပ်အကိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး)
- Environmental matters in construction law (ဆောက်လုပ်ရေးဥပဒေပါ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စ)
- False Claims Act (မမှန်ကန်သောတောင်းဆိုမှုများ)
- Federal construction (စုပေါင်းဆောက်လုပ်မှု)
- Fire regulations (မီးသတ်စည်းမျဉ်းများ)
- Fulfilling regulations for non-discrimination (ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေဖို့ စည်းမျဉ်းများ)
- Industry-standard construction contracts (လုပ်ငန်းခွင်အခြေခံစာချုပ်)
- Insurances issues (အာမခံပြဿနာ)
- Labor issues (အလုပ်သမားပြဿနာ)
- Licensing construction professionals (ဆောက်လုပ်ရေးပညာရှင်လိုင်စင်)
- Mediation (ဖြန်ဖြေခြင်း)
- Negotiating construction contracts (ဆောက်လုပ်ရေးစာချုပ်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းခြင်း)
- Negotiating litigation ofatermination claim (တရားစွဲဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းခြင်း)
- Project delivery systems (ပရောဂျက်ပို့ဆောင်မှုစနစ်များ)
- Prompt payments (အလျင်အမြန်ငွေပေးချေရခြင်း)
- Provide legal counsel (ဥပဒေရေးရာအကြံပေးခြင်း)
- Public construction (အများပိုင်ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စ)
- State building codes (နယ်မြေအလိုက်အဆောက်အဦဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ)
- State contracting procedures (စာချုပ်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း)
- Surety Law (လုံခြုံမှုအာမခံဥပဒေ)
- Sustainable construction (ရေရှည်ခိုင်မြဲသည့်ဆောက်လုပ်ရေး)
- Trials: trying construction cases in court (အမှုစစ်ဆေးတရားရင်ဆိုင်ခြင်း)
- Unresolved damages claims (မဖြေရှင်းနိုင်သောပျက်စီးမှုများအတွက် တောင်းဆိုမှုများ)
- Violations (ချိုးဖောက်မှုများ) စသဖြင့် အခန်းကဏ္ဍနေရာတော်တော်များများမှာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကိုယ်ငှားမယ့်ရှေ့နေနဲ့ ဥပဒေအဖွဲ့ကို Construction မှာရှိတဲ့ Stage တိုင်းကို သေသေချာချာ ဆွေးနွေးအသိပေးပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာ အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ။
(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ရှေ့နေက ဘာတွေလုပ်ပေးရတာလဲ)
Construction လောကဆိုတာ ရှုပ်ထွေးလွန်းပါတယ်။ ဟိုကိစ္စလည်းကိုယ်လုပ်မှ ဒီကိစ္စလည်း ကိုယ်ပါမှဆိုတာကတော့ သိပ်မဟုတ်သေးပါဘူး၊ အဲ့တော့ သူ့နေရာနဲ့သူ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ ခန့်အပ်ရပါတော့မယ်။
ရှေ့နေဆိုတဲ့အမျိုးက ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Process တွေကိုလည်း ခန့်မှန်းနိုင်တာကြောင့် ဘယ်ဥပဒေတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်၊ ဘယ်ဥပဒေကတော့ဖြင့် ဘယ်လို ပြင်ဆင်ခံရနိုင်တယ် စသဖြင့် ဥပဒေအပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာနိုင်တာကို ခန့်မှန်းပေးနိုင်တာကြောင့် မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ပရောဂျက်ကြီးကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်တောင် အခွင့်အရေး ရနိုင်ပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး ကုမ္ပဏီ၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း စတဲ့ အခြားတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပူပေါင်းတဲ့အခါမှာ ရေးထိုးရမယ့် စာချုပ်စာတမ်း ညှိနှိုင်းရမယ့် အလုပ်အကိုင် ကိစ္စတွေမှာပါ မပါမဖြစ် ဝန်ဆောင်မှုပေးရတာလည်း ရှေ့နေပါပဲ။ ဒါ့အပြင် စာချုပ်စာတမ်း ပြင်ဆင်ရေးသားတဲ့အခါမှာလည်း တခြားသူ ရေးဆွဲပြင်ဆင်တဲ့ စာချုပ်ထက် ရှေ့နေကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲတဲ့စာချုပ်က ပိုလို့တောင် ထောင့်စေ့ တရားဝင် ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး (Subcontractor) တစ်ခုမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြဿနာနဲ့ အဲ့ပြဿနာကို ဘယ်သူက ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့လဲ၊ ကိုယ့်ဘက်ကရော ဘာကြောင့် ကြိုတင်စီစဉ်ထားသင့်တာလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ အကျဉ်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Subcontractor တစ်ခုဟာ Hotel တစ်ခုကို မီးသတိပေးစနစ်တပ်ဆင်ပေးရာက စပြောရပါမယ်။ တပ်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့ ကန်ထရိုက်တာဟာ အဲ့ဒီမီးသတိပေးစနစ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်တပ်ဆင်ခြင်းမရှိဘူးလို့စွပ်စွဲခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့ ကန်ထရိုက်တာရဲ့ရှေ့နေဖြစ်တဲ့ Stephen Antony က ဆိုးရွားတဲ့၊ မသိဆိုးရွားအစဉ်အလာ တရားစီရင်ခြင်းကနေ ကန်ထရိုက်တာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ Construction Contract ကိုက ခိုင်မာနေလို့ပါပဲ။
ဆောက်လုပ်ရေး ဥပဒေဆိုတာ ရှုပ်ထွေးတဲ့စဉ်းမျဉ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ အထူးပြုထားတဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ပြဿနာတက်ရင်လည်း အရမ်းကြီးမားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဥပဒေနဲ့ တရားရေးနည်းစနစ်အပြင် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကိုပါ သိတတ် နားလည်တဲ့ ရှေ့နေများနဲ့ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ခုနက Construction Lawyer ဟာ ဘာလို့ ဒီလိုရှုပ်ထွေးတဲ့ လမ်းစဉ်ကြီးကို ဖြတ်ကျော်နိုင်တာလဲ။ တကယ်ဆို Stephen Antony ရဲ့ Kadish & Antony Law Group ဟာဆိုရင် ဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ်က မတူညီ ကွဲပြားတဲ့ တရားရေးကိစ္စ ကိုင်တွယ်မှုတွေမှာ အတွေ့အကြုံဟာ နှစ်ပေါင်းမနည်းပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ကန်ထရိုက်များမှ Subcontractor, ပိုင်ရှင်များကိုလည်း အောက်ပါအချက်တွေနဲ့ ကူညီလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
- Business contracts (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းများကိစ္စ)
- Breach of contract claims (ဖောက်ဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာစာချုပ်)
- Construction defect claims (ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက်တောင်းဆိုမှု)
- Delay/disruption claims (နှောင့်နှေးခြင်း၊ ပြိုကွဲခြင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုများ)
- Mechanic's lien claims (Mechanic များရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အဆိုများ)
- Construction bonds (ဆောက်လုပ်ရေးခံဝန်ချုပ်များ)
- Registrar of Contractors' claims (ကန်ထရိုက်တာတောင်းဆိုမှုမှတ်ပုံတင်)
Kadish & Antony Law Group ဆိုတာ ရှေ့နေတဖြစ်လဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ တည်ထောင်သူ Gene Kadish ကိုယ်တိုင်ကိုက ဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့အတွက် Construction Lawyer တစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ Kadish ဟာဟိုးအရင်တည်းက အရီဇိုးနားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ စီးပွားရေးဥပဒေပညာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိတွေ့လာခဲ့ရတာကြောင့်၊ အသေးစားနဲ့ အလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်၊ သောက၊ ပြဿနာတွေကို သိလာခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ချိန်တည်းက တနိုင်တပိုင်ကူညီဖို့ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြစွာနဲ့ Law Group ကြီးကို တည်ထောင်ထားခဲ့တာ အခုချိန်ထိပါပဲ။ ရှေ့နေဆိုတာ ရှေ့နေလိုက်ရပြီးရော၊ စာချုပ်တွေ ချုပ်နေရပြီးရော၊ ပိုက်ဆံတွေရနေရင်ပြီးရော၊ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းရှင်မှာ ဘာတွေ အဆင်မပြေ၊ အခက်အခဲ ဖြစ်နေလဲ။ ဘယ်လိုဥပဒေနဲ့ ကာကွယ်ကယ်တင်ရမလဲ။ လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။ လုပ်ငန်းစီးပွား အကျိုးအမြတ်ထွက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ လုပ်ငန်းမှာ မှီခိုနေတဲ့ ဝန်ထမ်းပေါင်းများစွာရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ ထမင်းလုတ်ပေါင်းများစွာကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးမလဲဆိုတာ ရှေ့နေတစ်ဦးရဲ့ စိတ်စေတနာနဲ့ အရည်အချင်းတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တရားစီရင်တာလား၊ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာလား။ အခြေအနေတိုင်းက ကွဲပြား ခြားနားတယ်ဆိုတာ သိထားရပါမယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ တရားခွင်မှာ တရားစီရင် ဆုံးဖြတ်ခြင်းက မိတ်ဆွေတို့ လိုချင်တာရဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်မှန်နေရင် ဒါဟာ ကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ရပိုင်ခွင့်၊ တောင်းဆိုခွင့်တွေကို များသောအားဖြင့် ညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့ ဖြေရှင်းကြတာများပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီအငြင်းပွားမှုမျိုးကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းက စာချုပ်စာတမ်းထဲ ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့ ...
စာချုပ်က တရားဝင်ဖြစ်ဖို့တော့ လိုမှာပါ။
နောက်ဆုံး ပြောချင်တာကတော့ မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ တခြားကုမ္ပဏီ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ တွဲလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အစစအရာရာ စနစ်တကျ စီစဉ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် Job Scope တွေကို သေချာလေ့လာပါ။ Project Claim Amount ကိုလည်း Construction Time အတွက်တင်မဟုတ်ပဲ Maintenance အတွက်ပါ ရေးဆွဲရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဆောက်လုပ်ရေးမှာ ပါမယ့် Engineer, Supervisor တွေရဲ့ အရည်အချင်းကို သတ်မှတ်ထားပါ။ စာချုပ်ထဲမှာ ပါတာတွေကိုလည်း အသေးစိတ် နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ နားလည်တဲ့ ရှေ့နေတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကို ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ။
အားလုံးပဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင် အောင်မြင်ကြပါစေ…